Honeymoon & Beach - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မင်ျဂလာဆောငျမယျ့ မောငျနှံတှအေတှကျ ပြားရညျစမျးခရီးဆိုတာ မပါမဖွဈပေါ့နျော။
တဈသကျမှာ တဈခါ နှဈယောကျတညျးခဈြစ ခငျစမှာ အတူတူသှားရတဲ့ ခရီးမို့ ကွညျနူးစရာအမှတျတရတှေ ပွညျ့နဖေို့ကလညျး အရေးကွီးလှတာပေါ့။
ပွနျတှေးလိုကျတိုငျး စိတျခမျြးသာစရာတှနေဲ့ ပွညျ့နဖေို့ဆိုတာ ကွိုတငျပွငျဆငျထားဖို့လိုသလို၊ နရောရှေးခယျြမှု မှနျကနျဖို့လညျး အဓိကပဲနျော။
ဒီလိုပှငျ့လငျးတဲ့ နှရောသီမှာလကျထပျမဲ့ ဇနီးမောငျနှံတှေ၊ ခရီးဝေး၊ ခရီးကွမျးမသှားခငျြတဲ့လူတှေ၊ ပြားရညျစမျးခရီးအတှကျ ခှငျ့ရကျရှညျမရတဲ့မောငျနှံတှေ၊ အတှကျဆို ” အခဈြနဲ့အတူ ကမျးခွသှေားပါ” လို့ အကွံပေးခွငျပါတယျ။
ကမျးခွသှေားရငျ တကယျကွီး ပြျောရမှလား? ဆကျသာဖတျကွညျ့လိုကျပါလို့။
၁) မိမိနဲ့ ခဈြခဈြဟာ ခရီးပနျးခွငျး မခံစားရနိုငျတော့ပါဘူး။
သိကွတဲ့အတိုငျး မွနျမာမှ နာမညျကွီးတဲ့ ခြောငျးသာ၊ ငှဆေောငျ၊ ငပလီ စတဲ့ကမျးခွတှေဟော သှားရေးလှယျကူ အဆငျပွပွေီး အခြိနျတိုအတှငျး သှားနိုငျတဲ့နရောတှေ မို့ သှားခြိနျပွနျခြိနျ၊ ခရီးပနျးမှာကို ခေါငျးထဲမထေ့ားလို့ရတာပေါ့နျော။
၂) တဈသကျတာ အလှဆုံးဓာတျပုံတှေ ရိုကျလို့ရပါတယျ။
စုံတှဲ နှဈယောကျရိုကျဖို့ ဖုနျးလေးပါမယျ၊ Tripod လေး ပါမယျဆိုရငျတောငျ Romantic ဖွဈတဲ့ ပငျလယျကွီး နောကျခံထား၊ ကြောကျဆောငျလေးတှေ ၊ လှိုငျးလုံးလေးတှနေဲ့ Couple Goal တှေ တဈပြျောကွီးရိုကျနိုငျပါတယျ။
Photographer မလို Lighting မလို သဘာဝ နရေောငျက မိမိနဲ့ ခဈြခဈြကို အလှဆုံးဖွဈစမှော သခြောပါတယျ။
( ဓာတျပုံရိုကျဖို့ Pose တှေ အမြားကွီးသာ ကွိုစဉျးစားထားလိုကျပါ။)
၃) မိမိခဈြသူဟာ အစားတဈလိုငျးဖွဈပါက သငျအမှတျပွညျ့ရနိုငျပါတယျ။
Beach သှားပွီ ဆိုတာနဲ့ ပငျလယျစာ( Sea food) တှကေို လိုသလောကျ၊ ကွိုကျသလောကျ လတျလတျဆကျဆကျ ရနိုငျတာမို့ စားရမယျ့ စာရငျးလေးသာ ကွိုလုပျထား။
ပြားရညျစမျး မောငျနှံတို့ ကမျးခွဘေကျလှညျ့ ဖယောငျးတိုငျလေးထှနျး( Candle light Dinner) လေးနဲ့ လတေဈဖွူးဖွူးမှာ ပငျလယျစာလေးစား။ ဒီထကျ ကောငျးတာတောငျ ဒီလောကျကောငျးမယျမထငျဘူးနော့။
* ဒီနရောမှာ မှာခငျြတာက မိမိရော ခဈြသူပါ ပငျလယျစာ ဓာတျတညျ့မတညျ့ ကွိုသိထားရငျ ပိုကောငျးပါမယျ။ ဓာတျမတညျ့မှာ စိတျပူသူတှလေညျး ( Burmeton) ကွိုဆောငျသှားပါ။ ပငျလယျစာ စားပွီး ဝမျးလြှောတမြိုး ဖွဈလာရငျဆောငျထားဖို့ ဓာတျဆားရညျ လေးပါဆောငျသှားပါ။*
၄) မနကျစောစော ကမျးခွတေဈလြှောကျ လမျးလြှောကျနိုငျပါတယျ။
ပြားရညျစမျးခရီးရဲ့ အရသာဟာ သငျ့ခဈြသူနဲ့အတူ နိုးထရခွငျးပါ။ ဒါကိုမှထပျပွီး နရေောငျထှကျစမှာ ကမျးခွတေဈလြှောကျ ခရုခှံလေးကောကျပွီး လမျးလြှောကျရမယျဆိုရငျ ပြားရညျစမျးခရီးမှာ ဘာမှတောငျထပျမလိုလောကျတော့ပါဘူးနျော
* လမျးလြှောကျ ဖိနပျ သို့ slipper လေး ကွိုဆောငျသှားပါ။*
ကမျးခွတေျောတျောမြားမြားမှာ Water sport( ရထေဲဆော့ရသော ကစားနညျး) မြားရှိလရှေိ့ပါတယျ။ တဈယောကျထဲဆို အသညျးငယျခဲ့ သမြှ ခဈြသူနဲ့ အတူပြျောရှငျစှာ ဆော့ကွညျ့ပါ။
Speed boat, Banana boat, စီးမလား? ရထေဲက ငါးလေးတှေ တူတူကွညျ့မလား?
နောကျဆုံးရကွေောကျတယျဆိုရငျတောငျ ကမျးခွမှော စှနျလေးလှတျ၊ မွငျးလေးစီးလို့ရပါသေးတယျနျော။
* ရဆေော့လို့ အသားမမဲခငျြ နမေလောငျခငျြရငျ နရေောငျကာ sun screen ဆောငျပွီး နှဈနာရီတခါ ပွနျလိမျးပေးပါ။ ရကေူးဝတျစုံ၊ အပျေါထပျ( Swim wear cover) ၊ နကောမကျြမှနျ၊ တို့ယူသှားဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့နျော*
ကဲ ဒါဆို နောကျတဈခါ ပွနျမေးကွညျ့မယျ ” ပြားရညျစမျးခရီး ပွငျဆငျတော့မှာလားလို့”
မင်္ဂလာဆောင်မယ့် မောင်နှံတွေအတွက် ပျားရည်စမ်းခရီးဆိုတာ မပါမဖြစ်ပေါ့နော်။
တစ်သက်မှာ တစ်ခါ နှစ်ယောက်တည်းချစ်စ ခင်စမှာ အတူတူသွားရတဲ့ ခရီးမို့ ကြည်နူးစရာအမှတ်တရတွေ ပြည့်နေဖို့ကလည်း အရေးကြီးလှတာပေါ့။
ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း စိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ ပြည့်နေဖို့ဆိုတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုသလို၊ နေရာရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ဖို့လည်း အဓိကပဲနော်။
ဒီလိုပွင့်လင်းတဲ့ နွေရာသီမှာလက်ထပ်မဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေ၊ ခရီးဝေး၊ ခရီးကြမ်းမသွားချင်တဲ့လူတွေ၊ ပျားရည်စမ်းခရီးအတွက် ခွင့်ရက်ရှည်မရတဲ့မောင်နှံတွေ၊ အတွက်ဆို ” အချစ်နဲ့အတူ ကမ်းခြေသွားပါ” လို့ အကြံပေးခြင်ပါတယ်။
ကမ်းခြေသွားရင် တကယ်ကြီး ပျော်ရမှလား? ဆက်သာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါလို့။
၁) မိမိနဲ့ ချစ်ချစ်ဟာ ခရီးပန်းခြင်း မခံစားရနိုင်တော့ပါဘူး။
သိကြတဲ့အတိုင်း မြန်မာမှ နာမည်ကြီးတဲ့ ချောင်းသာ၊ ငွေဆောင်၊ ငပလီ စတဲ့ကမ်းခြေတွေဟာ သွားရေးလွယ်ကူ အဆင်ပြေပြီး အချိန်တိုအတွင်း သွားနိုင်တဲ့နေရာတွေ မို့ သွားချိန်ပြန်ချိန်၊ ခရီးပန်းမှာကို ခေါင်းထဲမေ့ထားလို့ရတာပေါ့နော်။
၂) တစ်သက်တာ အလှဆုံးဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်လို့ရပါတယ်။
စုံတွဲ နှစ်ယောက်ရိုက်ဖို့ ဖုန်းလေးပါမယ်၊ Tripod လေး ပါမယ်ဆိုရင်တောင် Romantic ဖြစ်တဲ့ ပင်လယ်ကြီး နောက်ခံထား၊ ကျောက်ဆောင်လေးတွေ ၊ လှိုင်းလုံးလေးတွေနဲ့ Couple Goal တွေ တစ်ပျော်ကြီးရိုက်နိုင်ပါတယ်။
Photographer မလို Lighting မလို သဘာဝ နေရောင်က မိမိနဲ့ ချစ်ချစ်ကို အလှဆုံးဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။
( ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ Pose တွေ အများကြီးသာ ကြိုစဉ်းစားထားလိုက်ပါ။)
၃) မိမိချစ်သူဟာ အစားတစ်လိုင်းဖြစ်ပါက သင်အမှတ်ပြည့်ရနိုင်ပါတယ်။
Beach သွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ပင်လယ်စာ( Sea food) တွေကို လိုသလောက်၊ ကြိုက်သလောက် လတ်လတ်ဆက်ဆက် ရနိုင်တာမို့ စားရမယ့် စာရင်းလေးသာ ကြိုလုပ်ထား။
ပျားရည်စမ်း မောင်နှံတို့ ကမ်းခြေဘက်လှည့် ဖယောင်းတိုင်လေးထွန်း( Candle light Dinner) လေးနဲ့ လေတစ်ဖြူးဖြူးမှာ ပင်လယ်စာလေးစား။ ဒီထက် ကောင်းတာတောင် ဒီလောက်ကောင်းမယ်မထင်ဘူးနော့။
* ဒီနေရာမှာ မှာချင်တာက မိမိရော ချစ်သူပါ ပင်လယ်စာ ဓာတ်တည့်မတည့် ကြိုသိထားရင် ပိုကောင်းပါမယ်။ ဓာတ်မတည့်မှာ စိတ်ပူသူတွေလည်း ( Burmeton) ကြိုဆောင်သွားပါ။ ပင်လယ်စာ စားပြီး ဝမ်းလျှောတမျိုး ဖြစ်လာရင်ဆောင်ထားဖို့ ဓာတ်ဆားရည် လေးပါဆောင်သွားပါ။*
၄) မနက်စောစော ကမ်းခြေတစ်လျှောက် လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်။
ပျားရည်စမ်းခရီးရဲ့ အရသာဟာ သင့်ချစ်သူနဲ့အတူ နိုးထရခြင်းပါ။ ဒါကိုမှထပ်ပြီး နေရောင်ထွက်စမှာ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် ခရုခွံလေးကောက်ပြီး လမ်းလျှောက်ရမယ်ဆိုရင် ပျားရည်စမ်းခရီးမှာ ဘာမှတောင်ထပ်မလိုလောက်တော့ပါဘူးနော်
* လမ်းလျှောက် ဖိနပ် သို့ slipper လေး ကြိုဆောင်သွားပါ။*
ကမ်းခြေတော်တော်များများမှာ Water sport( ရေထဲဆော့ရသော ကစားနည်း) များရှိလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ထဲဆို အသည်းငယ်ခဲ့ သမျှ ချစ်သူနဲ့ အတူပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ကြည့်ပါ။
Speed boat, Banana boat, စီးမလား? ရေထဲက ငါးလေးတွေ တူတူကြည့်မလား?
နောက်ဆုံးရေကြောက်တယ်ဆိုရင်တောင် ကမ်းခြေမှာ စွန်လေးလွှတ်၊ မြင်းလေးစီးလို့ရပါသေးတယ်နော်။
* ရေဆော့လို့ အသားမမဲချင် နေမလောင်ချင်ရင် နေရောင်ကာ sun screen ဆောင်ပြီး နှစ်နာရီတခါ ပြန်လိမ်းပေးပါ။ ရေကူးဝတ်စုံ၊ အပေါ်ထပ်( Swim wear cover) ၊ နေကာမျက်မှန်၊ တို့ယူသွားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော်*
ကဲ ဒါဆို နောက်တစ်ခါ ပြန်မေးကြည့်မယ် ” ပျားရည်စမ်းခရီး ပြင်ဆင်တော့မှာလားလို့”